အန်းဟျိုဆော့ - ဝီကီပီးဒီးယား
အန်းဟျိုဆော့ပ် (ခ) ပေါလ်အန်း (၁၉၉၅၊ ဧပြီ ၁၇ ဖွား) သည် တောင်ကိုရီးယား သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၇ နှစ်အရွယ် (၂၀၁၇)၊ Abyss (၂၀၁၉)၊ Dr. Romantic2(၂၀၂၀) တို့မှတစ်ဆင့် နာမည်ကြီးလာသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ​အောက်တိုဘာလက ​တွေ့ရစဉ်
(1995-04-17) ဧပြီ ၁၇၊ ၁၉၉၅ (အသက် ၂၆)
၁.၂ ၂၀၁၅–၂၀၁၆၊ ပွဲဦးထွက်နှင့် အနုပညာကနဦးပိုင်း
၁.၃ ၂၀၁၇–လက်ရှိ၊ ခေါင်းဆောင်မင်းသားဘဝ
၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့၌ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့တွင် မွေးဖွားသည်။ အသက် ခုနစ်နှစ်အရွယ်တွင် မိသားစုလိုက် ကနေဒါနိုင်ငံ၊ တိုရွန်တိုသို့ မိသားစုလိုက် ရွှေ့ပြောင်းသွားရာ၊ အသက် ၁၇ နှစ်ရောက်မှ (မိသားစုနှင့်ခွဲ၍) ကိုရီးယားသို့ ပြန်ရောက်လာသည်။ ဂုမင်းတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်၍ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဌာနမှ ဘွဲ့ရသည်။
ကိုရီးယားသို့ ပြန်ရောက်ပြီးနောက် JYP Entertainment ထံ ရွေးချယ်လေ့ကျင့်ပေးခံရပြီး Got7 အဖွဲ့၌ ပွဲဦးထွက်ခွင့်ရခဲ့သည်။ သို့သော် ၎င်းကမ်းလှမ်းချက်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး အခြားအခွင့်အရေးများ ထပ်မံကြိုးစားရှာဖွေခဲ့သည်။
၂၀၁၅–၂၀၁၆၊ ပွဲဦးထွက်နှင့် အနုပညာကနဦးပိုင်းပြင်ဆင်
၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ရက်နေ့တွင် Starhaus Entertainment က One O One ပရောဂျက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ ပထမဆုံး တစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ် "Love You" ကို တင်ဆက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့တွင် အန်းဟျိုဆော့ပ်နှင့်အတူ ဂွါ့ရှီယန်၊ ဆုန်းဝေါန်းဆော့၊ ဂွမ်းဒိုဂယောန်းတို့ ပါဝင်သည်။ သို့သော် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် အဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
အန်းဟျိုဆော့ပ်သည် သူ၏သရုပ်ဆောင်ပွဲဦးထွက်အဖြစ် MBC ဒရာမာ Splash Splash Love တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဂီတရသစုံရှိုး Always Cantare တွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် One More Happy Ending၊ Happy Home၊ Entertainer တို့တွင်လည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Queen of the Ring၊ My Father is Strange တို့တွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရာမှ လူသိများလာသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ၁၇ နှစ်အရွယ်၌ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ ၂၀၁၈ အက်စ်ဘီအက်စ် ဒရာမာဆုပေးပွဲတွင် အကောင်းဆုံး လူသစ်သရုပ်ဆောင်ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် YouTube Red ၌ ထုတ်လွှင့်သည့် Top Management ဒရာမာတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မင်းသမီး ဘတ်ဘိုယောင်းနှင့်အတူ အချစ်ဟာသ စိတ်ကူးယဉ် မှုခင်းဇာတ်လမ်းတွဲ Abyss တွင် အဓိကဇာတ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် နာမည်ကြီး ဆေးလောကဒရာမာ Dr. Romantic ၏ အတွဲ (၂) ၌ အထွေထွေ ခွဲစိတ်ဆရာဝန် ဆောဝူဂျင်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ပရိသတ်နှစ်ခြိုက်မှု များစွာရရှိခဲ့သကဲ့သို့ (၅၆) ကြိမ်မြောက် ဘဲ့ဆန်းဆုပေးပွဲတွင် အကောင်းဆုံး လူသစ်သရုပ်ဆောင်ဆု ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ အက်စ်ဘီအက်စ် ဒရာမာဆုပေးပွဲတွင်လည်း အကောင်းဆုံး မီနီစီးရီး အက်ရှင်ဒရာမာ သရုပ်ဆောင်ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် မင်းသမီး ဂင်ယူဂျောင်နှင့်တွဲဖက်၍ ရာဇဝင်ဇာတ်လမ်းတွဲ Lovers of the Red Sky ၌ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ၂၀၂၂ ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း အက်စ်ဘီအက်စ်က ထုတ်လွှင့်မည့် A Business Proposal ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် မင်းသမီး ဂင်ဆယ်ဂျောင်နှင့် သရုပ်ဆောင်ရန် ၂၀၂၁ ဇွန်လအတွင်းက အတည်ပြုခဲ့သည်။
Splash Splash Love MBC Park Yeon / Che A-jik 
Entertainer SBS Ji-noo 
Three Color Fantasy – Queen of the Ring MBC Park Se-gun 
My Father Is Strange KBS2 Park Chul-soo 
Still 17 SBS Yoo Chan 
Top Management Youtube Red Hyun Soo-yong Web series 
Abyss tvN Cha Min 
Dr. Romantic2SBS Seo Woo-jin 
A Business Proposal Kang Tae-moo 
2015 Always Cantare – Season2tvN Cast member 
2016 Celebrity Bromance – Chuseok Special MBig TV Cast member (with Jackson Wang) 
2019 4th Asia Artist Awards Money Today  MC with Leeteuk Lim Ji-yeon and Nancy
Running Man SBS Guest Ep. 424
2021 Best New Actor Dr. Romantic2ဆန်ကာတင် 
2017 Rookie Award My Father is Strange ဆုရရှိ 
2019 Choice Award Ahn Hyo-seop ဆုရရှိ 
2020 Best Actor Award Dr. Romantic2ဆုရရှိ 
Popularity Award (Actor) Ahn Hyo-seop ဆန်ကာတင် 
2020 Best New Actor – Television Dr. Romantic2ဆုရရှိ 
2019 Best New Actor Abyss ဆန်ကာတင် 
2016 Best New Actor Happy Home ဆန်ကာတင်
2018 Best New Actor Still 17 ဆုရရှိ 
Character of the Year ဆန်ကာတင်
2020 Excellence Award, Actor inaMiniseries Action Drama Dr. Romantic2ဆုရရှိ 
Dr. Romantic2ဆန်ကာတင် 
↑ Ahn Hyo-Seop (안효섭, Korean actor, singer)။ 19 July 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 안효섭 :: 네이버 인물검색 (in ko)။ 30 November 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Yoon၊ Hyo-jung။ "မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ" (in ko)၊ News 1၊ August 30, 2017။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 30 November 2020။
↑ Which K-drama actors almost debuted as K-pop idols? (in en) (10 November 2020)။4August 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "신의 한 수다" 아이돌 연습생서 '배우'로 전향해 '대박' 친 스타 5인 (in ko)။ Insight (July 28, 2019)။ 30 November 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Starhouse Entertainment Launches Project Group "One O One" (in ko)။ 19 August 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇.၀ ၇.၁ Lee၊ Jihyun (January 1, 2019)။ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ (in ko)။ News1။ 31 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ '어비스' 박보영X안효섭, 캐스팅 확정…'영혼 부활 커플' 케미 예고 [공식입장] (in ko)။ Xports News။ Naver (11 February 2019)။ 12 November 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉.၀ ၉.၁ MacDonald၊ Joan (June 5, 2020)။ 2020 Baeksang Arts Awards Honor The Best Korean Dramas And Films။ Forbes။5June 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ Jeong Hee-yeon။ "안효섭-이성경, 미니시리즈 판타지/로맨스 우수상 (2020 SBS 연기대상)" (in ko)၊ December 31, 2020။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ SBS 측 "김유정X안효섭 '홍천기' 긍정 검토 중"[공식] (in ko) (19 November 2020)။ 13 July 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ Kim Yeon-han။ "안효섭 '사내맞선' 출연 확정, 재벌3세 변신 [공식]" (in ko)၊ hankyung၊ June 10, 2021။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 10 June 2021။
↑ 안효섭을 기억해!… '퐁당퐁당 LOVE' 연기 첫 데뷔 (in ko)။ Hankook Ilbo (December 19, 2015)။ 23 July 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ‘한번 더 해피엔딩’ 안효섭 "소중한 시간, 배움의 연속이었다" (in ko)။ Asia Today (March 11, 2016)။ 23 July 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ahn Hyo-seop to join "Happy Home"။ Hancinema။ eDaily (January 28, 2016)။ 30 March 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ [단독 안효섭, '딴따라' 합류..지성과 호흡 '직진 행보'] (in ko)။ Chosun (April 14, 2016)။ 23 July 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ahn Hyo Seob and Kim Seul Gi Happy To Work Together Again။ MSN။ BNT News (January 18, 2017)။ 30 March 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ <아버지가 이상해> 송원석-안효섭, 주말 안방극장 책임지는 '케미 형제' (in ko)။ iMBC (June 1, 2017)။ 30 March 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 안효섭 ‘서른이지만 열일곱입니다’ 출연확정…신혜선·양세종과 호흡 [공식입장] (in ko) (May 17, 2018)။ 30 March 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ahn Hyo-seop Turns From Athlete to Genius Musician။ TV Report (October 29, 2018)။ 30 March 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ‘Abyss’ cast excited by show’s script (4 May 2018)။3May 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 낭만닥터 김사부 시즌2’ 한석규-이성경-안효섭 캐스팅 확정, 내년 1월 첫방송[공식] (in ko) (18 September 2019)။ 28 January 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ‘언제나 칸타레2’ 안효섭, 마지막 공연 비하인드 컷 공개 ‘화기애애’ (in ko)။ TenAsia (August 6, 2015)။ 30 March 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Watch Jackson and Ahn Yo Seob Show off Their Bromance။ Koogle (September 15, 2016)။6August 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Broadcast networks can broadcast many channels.
↑ Kim၊ Myung-mi။ "APAN STAR AWARDS’ 우수상 후보 공개, 박보검부터 지창욱까지" (in ko)၊ naver၊ Newsen၊ November 13, 2020။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 November 2020။
↑ Kim Hee Sun & EXO win Grand Prize Awards at the 2017 Asia Artist Awards။ KBS World (November 16, 2017)။ 15 July 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Winners Of 2019 Asia Artist Awards (November 27, 2019)။ 23 December 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Winners Of The 2020 Asia Artist Awards (28 November 2020)။ 28 November 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2020 Asia Artist Award Actor Shortlist။ 8 March 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ '2019코리아드라마어워즈(KDA)' 연기대상 후보..김해숙·최수종·염정아·조정석 등 (in ko) (September 27, 2019)။ 27 September 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2020 SBS 연기대상' 박은빈♥김민재, 이민호♥김고은 꺾고 베스트 커플상 (in ko)။7January 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikimedia Commons တွင် အန်းဟျိုဆော့ နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
အန်းဟျိုဆော့ at HanCinema
Internet Movie Database ပေါ်ရှိ အန်းဟျိုဆော့
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အန်းဟျိုဆော့&oldid=710194" မှ ရယူရန်
၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။